1% mepere emepe Manufacturers & Suppliers - China 1% Openness Factory
Ime ụlọ na-ekpuchi Windows Sunscreen Polyester Shade Fabric
Ihe mgbochi maka ime ụlọ.
Owu na linen linen
A na-eji akwa ákwà akwa nke akwa akwa na akwa akwa ya na ihu ya siri ike, ikuku ikuku dị mma ma na-eyi mgbochi. Dị ka akwa ákwà mgbochi, ọ bụ nhọrọ dị mma. Ọ nwere ike ịmịkọrọ ntụ ụfọdụ n’ikuku. Ọdịdị nke owu na akwa akwa akwa dị mfe ma dị mma, nke nwere echiche siri ike nke ịma mma okike na ihe nro dị nro.
Front katuunu Sunshade Yi HDPE Anti UV Shadow ntupu Solar Screen akwa
Site na echiche zuru oke nke ndụ dị mma, ndị mmadụ bidoro ịkwado ndụ okike nke "ụlọ ndụ akwụkwọ ndụ", na-enwe olileanya iwebata ụdị okike n'ime ụlọ ebe a na-ebi ndụ, na-ewetara ezinụlọ ahụ ume na ume na-enweghị njedebe. Taa, anyị ga-ewebata obere usoro nke ákwà ngebichi iji gwa gị otu esi eji agba okike, wepụ gị n'obodo ahụ nwere nsogbu, wee laghachite na ndụ ebumpụta ụwa nke dị mfe nke ákwà mgbochi ụlọ!
Site na agba akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ dị ka isi ahụ, ụlọ jupụtara n'ike na ume.
China Mechanism E Bipụtara Sunshade Sunscreen Sunshine akwa maka ala Blinds
Na-ewu ewu Sunscreen Blind Fabric
1.Sunscreen ákwà bụ ọkụ na ire ọkụ retardant, nnukwu ọha ụlọ na ụlọ ọrụ ụlọ na-chọrọ izute mba ọkụ nchebe ụkpụrụ. Ka ọ dị ugbu a, dị ka mkpa ụlọ dị iche iche, ákwà mkpuchi na-ejikarị ọkụ B1 na-enwu ọkụ (oxygen index oxygen32, ụlọ ndị dị n'ozuzu) na ọkwa B2.
2.The size bụ mgbe nile. Ihe nke akwa anwu anwu na-achoputa na o nweghi ike ichikota, o gaghi adi ire, ma jigide mbadamba ya.
Ugboro abụọ Polyester Roller Blinds Compress Shade 75cm Width Sunscreen Fabric for Hotel
Njirimara arụmọrụ nke akwa mkpuchi akwa-UV igbochi
Dị ka anyị niile maara, mgbe ụzarị ultraviolet dị n’anyanwụ na-afụcha anụ ahụ, ọ ga-ebute ụfọdụ mmebi ahụ. Dabere na nyocha, photodermatitis nwere ike ịpụta mgbe ụzarị ultraviolet dị oke njọ, na erythema, itching, blisters, edema, wdg na ọbụlagodi ọrịa kansa. na mgbakwunye, mgbe ụzarị ultraviolet dị n’anyanwụ na-arụ ọrụ na sistemụ etiti ahụ, mgbaàmà dịka isi ọwụwa, isi-awọ, na mmụba nke okpomoku ahụ, ụzarị ultraviolet dị n’anyanwụ na-arụ ọrụ na anya nwere ike ịkpata conjunctivitis ma nwekwa ike ibute cataracts. Ọzọkwa, ìhè anyanwụ ga-eme ka ịka nká ngwa ngwa na ịchọ mma nke arịa ụlọ na arịa ụlọ.
Ikiji Sunscreen Nlereanya Spring Rolind Blind Office Curtains akwa
Mee ka ọkụ dịkwuo mma
Ìhè na nchapụta emetụta gburugburu ebe ọkụ. Mgbe ọkụ batara n'ime ụlọ ahụ ozugbo, ọkụ ahụ siri ike nwere ike imepụta mmetụta dị mma na oghere ime ụlọ na omume na omume ndị mmadụ, nwere ike ịkpalite mmeghachi omume uche nke ndị mmadụ, na-emetụta ọnọdụ ndị mmadụ na ịdị mma nke ndụ, yabụ meziwanye ọkụ ọkụ n'ime ụlọ dị ezigbo mkpa.